क्यालिफोर्नियाको सडकमा पाँच वर्षसम्म कसरी बेवारिसे भौतारिए यी युवा ? | News Portal from USA in Nepali
क्यालिफोर्नियाको सडकमा पाँच वर्षसम्म कसरी बेवारिसे भौतारिए यी युवा ?
अमेरिका– राम्रै काम गदै थिए । बीचमा उनले बाटो बिराए । झण्डै पा“च वर्ष उनी घरपरिवार सबैबाट सम्पर्कबिहीन भए । यसरी हराएका उनी अन्तत बेबारिसे अवस्थामा भेटिए–३४ वर्षिय राम थापा । केही दिन क्यालिफोर्नियाको सानफ्रान्सिसको देखेपछि कान्छा तार्जनले भिडियो खिचेपछि उनको दारुण अवस्थाले सबैको ध्यान खिचेको थियो । अन्ततः कान्छा तार्जनकै सक्रियतामा शुक्रबार उनी फेला परे र परिवारको जिम्मामा पुगे । क्यालिफोर्निया निवासी राज यादवले उद्धार गरेर परिवारजन सम्म पुराउने काम गरे ।
फाइल फाेटाे राम थापा
क्यालिफोर्नियाको बे एरियामा बस्दै आएका समाजसेवी तथा उनका दाजु भक्त थापाले बेबारिसे अवस्थामा भेटिएका भाईको जिम्मा लिएका छन् । भाइलाई बेबारिसे अवस्थामा देखेपछि उनले मन थाम्न सकेनन । ‘मैले कति खोजे किन यसरी हिडेर यो अवस्था बनाएको दाजु भक्त थापाले भावविह्वल हुदै भनेका थिए– अब आफुलाई सम्हालुपर्छ र सुध्रेर केही गर्नुर्छ । दाजुलाई देखेपछि बेबारिसे अवस्थामा भेटिएका भाई रामले पनि आ“सु थाम्न सकेनन ।
अहिले उनलाई उपचारका लागी अस्पतालमा राखिएको छ । काठमान्डौ सितापाइलाका राम झण्डै १३ वर्ष अघि अमेरिका आएका थिए । सम्पन्न परिवारमा हुर्केका उनी सिंगापुरमा होटल म्यानेजम्यान्ट पढदै थिए । सिंगापुरमा पढदा –पढ्दै उनी माफियाको चुगुलमा परे । माफियाको आश्वासनमा परेर अमेरिका आउने योजना बनाए । गैरकानुनी बाटो हुदै उनलाई अमेरिका छिराउन माफिया तयार भए ।
हुन्डुरस, मेक्सिको हुदै उनी चार महिनाको कष्टकर बाटो हुदै मुस्किलले अमेरिका छिरे । क्यालिफोर्नियामा झण्डै २१ वर्ष देखि बस्दै आएका भक्त थापाको ढोकामै पुराइदिने प्रलोभन देखाएर उनलाई दलालले रकम कुमल्याए । राम नाताले भक्त थापाका भाई (ठुलो बाबा)का छोरा हुन । दाजुकै ढोकामै पुग्ने भएपछि उनी अमेरिका छिर्न तयार भएका थिए ।
अमेरिकाको टेक्सस छिर्ने बितिक्कै उनी जेल परे । त्यही क्रममा उनी वकीलको स्केममा परे । केश फिर्ता लिने भन्दै १५ सय डलर वकीललाई बुझाइदिए दाजु भक्त थाापले । त्यसै गरी १० हजार डलर बोन राखेर भाइलाई टेक्ससको जेलबाट छुटाए । जेलबाट छुटेपछि उनी बस चढेर टेक्ससबाट दाजुको घर क्यालिफोर्निया पुगे । उनी क्यालिफोर्निया पुग्दा उनीसंग लगाएको एक सरो कपडा बाहेक केही थिएन । सबै दाजु भक्त थापाले खाने बस्ने र जागीर खोजीदिने सबै काम गरिदिए ।
उद्दार गरिएपछि राम थापा
सुरुका तीन वर्ष रामले सेभन इलेभने स्टोरमा काम गरे । कमाइ पनि राम्रै गदै थिए । त्यही बीचमा नेपालमा रामको बुबाको निधन भयो । त्यसले उनलाई थप निराशा बनायो । तल्लोबाट हुदै अमेरिका छिर्दा पाएको सास्तीले मानसिक तनाव झेलिरहेका उनलाई फेरि बुबाको निधनले थप तनाव भयो । उनी डिप्रेसनमा परे । माफियाको फन्दामा परेर तल्लो बाटो हुदै कष्टर जीवन भोगेर अमेरिका छिर्नु र यहा“ आएपछि बुबाको निधनले उसलाई डिप्रेसनमा धकेल्यो दाजु भक्त भन्छन्– ‘नेपालमा हुदा चिया समेत नपकाएको भाई यहा“ आएपछि सबै काम गर्नु पर्दाको तनाव झेल्न सकेन ।’
सेभन इलेभेनमा तीन महिना काम गरेपछि उनले छाडीदिए । दाजु भक्तले भाईको त्यो समयमा थप केही उपचार पनि गराए । स्टोरमा काम छाडेपछि क्यालिफोर्नियाको रेष्टुरा व्यवसायी निर्मल गौचनकोमा काम लगाईदिए । त्यहा“ पनि उनले काम छाडे त्यही बीच तनावका कारण राम दुव्र्यसनको लतमा फस्न थालीसेकका थिए । दाजु भक्त थापाले यस्तो नगर्न भी गाली पनि गरे । फेरि मोटेलमा काम सुरु गरे । मोटेलमा काम गर्दा केही खराब व्यक्तिको संगतमा परे । मोटेलमा काम गर्दा भाइ समस्यामा भएपछि फेरि स्टोरमा काम लगाइदिए दाजु भक्तले । स्टोरमा काम गरेपछि नया गाडी पनि किने । स्टोरमा काम गरेपछि छुटै कोठा लिएर बस्न थाले राम , झण्डै पा“च वर्ष अघि दाजु भक्तलाई भेटन आएपछि उनी त्यसपछि सम्पर्क बिहीन भए । दाजुले धेरैतिर खोजे फेला पारेनन । सबैतिर कतै फेला पारिन’ भक्तले भने–अहिले यो अवस्थामा देख्दा दुख लागेको छ ।’
अहिले उनी भाइलाई खोज्दै रात दिन भौतारिए । अहिले भाईलाई भेटेपछि खुशी छन् । अहिले भाईलाई अस्पतालमा उपचारका लागी राखेका छन् । सुधारकेन्द्रमा राखेर भाईलाई निको बनाएर उनको इच्छा अनुसार अगाडी बढने बताएका छन् । अमेरिका बस्ने चाहे त्यही अनुसार बन्दोबस्त गर्ने र नेपाल जाने इच्छा भए त्यही अनुसार व्यवस्था गर्ने दाजु भक्त थापाले जनाएका छन् ।
जो बाइडेन बने अमेरिकाको ४६ औ राष्ट्रपति
अमेरिका–कडा सुरक्षाका बीच जो ...
संयुक्त संसदद्धारा जो बाइडेनलाई अमेरिकी राष्ट्रपतिमा जीतको घोषणा
अमेरिका– जो बाइडेनलाई अमेरिकी ...